ज्ञानी र सज्जनहरुले धेरैजसो घाटाको जिन्दगी जीउनु पर्दो रहेछ
आज लगभग ३ दशक पछाडी आउँदा त्यो कुराको याद भयो। कता-कता समाजको अध्ययन गर्दा त्यस्तै कुरा नै सहि लागेको छ। राजा महेन्द्र हुन या तथाकथित जनआन्दोलनका सर्दार, पुल्पिटका पादरी हुन् या भट्ट पुजारी नै किन नहुन सबैमा यस्तै देख्दैछु। फट्याई गर्ने ठालु, इमानदारलाई आलु भन्ने उखान चरितार्थ भएको पाइयो।
सानो हुँदा आशिर्वाद पाइन्थ्यो; पढ्नु गुन्नु, ठूलो हुनु, ज्ञानी हुनु, धर्मी भएस, सच्चा गरेस आदि इत्यादी। ऐलेको समयमा आएर त्यो सबै हुनु भनेको चाहिँ सबै कुरामा ठगिनु र पछाडि पर्नु रहेछ। अझै भन्नुपर्दा कुर्नु बाहेकको केही होइन भन्ने भान हुन थालेको छ। ती सबै गरेर अन्तमा आफ्नो हाता लाग्ने भनेको सुन्य मात्र हो। वर्तमान परिवेशका नेपाली समाजको जीवनलाइ तुलनात्मक रुपमा हेर्दा प्रतिजवाफमा पाइने नतिजा अचम्मको छ।
सज्जनका दिन गए पाखण्डीका दिन आए भने जस्तै भएको छ।
एउटा सामान्य दृष्टान्त हेरौ। तपाइको घरमा दुइ सन्तान छन्। कसलाई बढी माया गर्नुहुन्छ? तपाइको जवाफ, समान रुपमा माया गर्छु भन्ने आउँछ। तपाइको जवाफ बिल्कुलै झुट हो। होइन भने परिक्षण गरेर हेर्नुहोस। तपाइका दुइ मध्ये एउटा सन्तान ज्ञानी छ। अर्को अलिक झगडालु बानीको छ। अनि तपाइँ कसरी ट्रिट गर्नुहुन्छ ?
काम गरेको पारिश्रमिक लिने कुरामा हेर्नु उस्तै छ। यो त जति दिए पनि खुरुक्क लिन्छ बिचरा थोरै दिए हुन्छ, धेरै दिनुपर्दैन। त्यो चाँहि मान्दैन बबाल गर्छ जति भन्छ तेती नै दिनु।
फटाहालाई छानि छानि इमानदारलाई पानी-पानी